China Sponge media abrasives fekitori uye vagadziri | TAA
Sponge midhiya hashairi sumbu rehasha midhiya ine urethane chipanje sekunamatira, iyo inosanganisa iko kugona kugona kweiyo urethane chipanje pamwe nekuchenesa uye kucheka simba retsika kuputika midhiya. Iyo inobhururuka panguva yekukanganisa, ichifumura mabrasives kumusoro nehumwe uye chimiro chakagadzirwa. Pakusiya pamusoro, chipanje chinodzokera kumashure pakureba saizi kugadzira gaba rinotora yakawanda yezvinhu zvinosvibisa, uye nekudaro rinovandudza jecha kuputika kwenzvimbo.
Iyo inonyanya kushandiswa ndeye TAA-S dzakateedzana nealuminium oxide uye TAA-G dzakateedzana nesimbi grit.
Type Profiles Hasha Media Agent Kushanda
TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium oxide # 16 Inokurumidza uye ine hukasha kune yakaoma maindasitiri kupfeka.
TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium oxide # 30 Kubviswa kwema multilayer kupfeka uye chimiro kune 75 micron.
TAA-S # 30 ± 50 micron Aluminium oxide # 80 Inoshanda kune imwe kana maviri laryers machira uye mbiri kune50 micron.
TAA-S # 30 ± 25 micron Aluminium oxide # 120 Inoshanda pane yakajeka uye ine mwero ngura, inogadzira 25 micron mbiri.
TAA-S # 30 <25 micron Aluminium oxide # 220 Zvekubvisa machira kana kusiira zvidiki zvemberi.
TAA-G-40 +100 micron Simbi Grit G40 Kubvisa kupfeka kwakanyanya. Zvekugadzirira pamusoro penzvimbo dzakadzikira uye nekubvisa elastomeric kana zvimwe zvakapfekedza zvakanyanya.
1. Sponge midhiya abrasives inogadzirwa ne polyurethane sponge yakaderera kutsemuka uye inogara kwenguva refu uye inogona kutsikirira kusvibiswa kweguruva izvo zvinowanzo guma nekuparara kweabrasives.
2. Iyo chipanji inonatsa iyo yakasvibisa yepamusoro (mill scale, girisi, nezvimwewo) uye nekudaro inovandudza rucheno rwechinhu pamusoro.
3. Kuchengetedzwa kwevashandi kunosimudzirwa uye njodzi dzakadai sekukuvara kwemaziso nemaindasitiri dzakaderedzwa nekuda kwekudzikira kwakadzika kwesiponji inopinza.
4. Kuderera kwemhando yepamusoro uye kushomeka patsva
5. Yakakwira mhando yepamusoro yekurapa kwenzvimbo inonzwisisika uye yakatsanangurwa
6.Kufukidza kunogara kwenguva refu, kudzikisa kuchengetedza mutengo.
8. Yayo jecha blasting michina idiki muhukuru uye inotakurika uye inokodzera pamusoro pekunatsa kwenzvimbo nhete uye yakakosha chikamu.
Iyi nharaunda ine hushamwari, yakachengeteka uye yakakwirira inoshanda nyowani nyowani inounza yakachena, yakajeka uye inoonekwa nzvimbo dzebasa.
1. Dual-chinhu chipanji midhiya hasha dzakakwenenzverwa kumusoro uchishandisa mweya-doven system
2. Kuputika kwesponge media hasha
* Bvisa simba rekurovera, rakapetwa uye rinodzvinyirira kuburitswa kweakasunungura nzvimbo yakasviba
* Fumura hasha, bvisa pamusoro contanη inants
3. Paunenge uchisiya pamusoro, iyo Sponge midhiya abrasives inowedzera kudzoka kune yakajairwa saizi ichigadzira vacuum iyo inotora yakawanda yemadust uye zvinoshatisa
Inoshandiswa zvakanyanya muMarine, Offshore Injiniya, Mauto, Petrochemical Project, Aerospace & Aviation, Nyukireya Simba, Nhoroondo Kudzoreredza, Wall Kuchenesa, Kuvaka Kugadziriswa nezvimwe.
Pashure: Kubereka simbi grit
Zvadaro: Kukuya mavhiri FW-09 akateedzana
16 # Sponge Midhiya Abrasives
Nyoro nyunje Media
Nyoro Sponge Midhiya
Sponge Jet nenyunje
Sponge Jet Inoputika Hasha Media
Sponge Jet Media Kuputika
Sponge Jet Sirivheri 16
Sponge Media Sirivheri 16 #
Sponge Media Sirivha 220 #
Sponge Media Sirivheri 30 #
Sponge Media Sirivha 80 #
Sponge-Jet nenyunje Yekutengesa
Chemical Kuumbwa C 0.85-1.20% Si 0.40-1.20% Mn 0.60-1.20% S -0.05% P -0.05% Kuoma HRC 40-50 Microstructure Homogeneous Tempered Martensite kana Troostite Density ≥ 7.2g / cm3 Fomu rekunze Spherical Hollow particles <10% Saizi yekuparadzira Screen Kwete Inch Screen saizi S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930 6 0.132 3.35 ...